सबै Dreamers कल गर्दै
lending8 मा मे 26, 2014 द्वारा लिखित।
येशू क्यास्ट्रो आफ्नो कथा साझा र आशा छ कि यो अरूलाई DACA को लागी आवेदन गर्न प्रेरित गर्छ।
एमएएफमा हाम्रो कामको बारेमा मैले सशक्त पार्ने चीजहरूमध्ये एउटा हो कि युवा नेताहरू उनीहरूको जोश अनुसरण गर्छन् र समुदायलाई फिर्ता दिन्छन्। येशू क्यास्ट्रो ती नेताहरू मध्ये एक हो जसले सपना देख्नेहरूको लागि लेन्डिंग सर्कलमा सम्मिलित भएका थिए र आप्रवासी युवाहरूको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। मैले उनलाई एक रोमाञ्चक बारेमा अन्तर्वार्ता लिए सार्वजनिक सेवा घोषणा उनले बचपन आगमनको लागि डिफर्ड एक्शन (DACA) को बारेमा जागरूकता जगाउन सिभिक सage्लग्नता र आप्रवासी मामिलाहरूको एसएफ कार्यालयसँग विकास गरेका छन।
तपाईं कसरी सिभिक सage्लग्नता र आप्रवासी मामिलाहरूको एसएफ अफिसमा सामेल हुनुभयो?
पहिलो पटक मैले सिभिक इंगेजमेन्ट एण्ड इमिग्रेन्ट अफेयर्स (ओसीआईए) को कार्यालयमा सम्पर्क गरेँ वा अझ विशेष गरी ओसीआईएका निर्देशक एड्रिएन पोन कोरो वार्षिक लन्चोनमा थिएँ। कसरी एक भाषण दिए पछि कोरो एक्सप्लोरिंग नेतृत्व कार्यक्रम मेरो जीवन परिवर्तन भयो, धेरै ब्यक्तिहरु मलाई बधाई दिन आए, र मेरो क्यारियर पथ को बारे मा चर्चा, म वास्तव मा सम्मानित थियो। निर्देशक पोनले मसँग कुरा गरेको केही मिनेट पछि मलाई लाग्यो कि उनी मसँग धेरै उभिनुभयो किनभने उनको कार्यालयको नामको कारण। म आप्रवासीहरूका लागि लडाईको बारेमा धेरै उत्साहित छु र उनीहरूको नाम सिभिक इंगेजमेन्ट अफ इमिग्र्यान्ट अफिस हो र यसैबखत मैले मेरो आँखालाई आकर्षित गरें जुन मलाई थाहा थियो कि म कुनै पनि कुरा भन्दा धेरै इन्टरशिप प्राप्त गर्न चाहान्छु।
PSA भिडियोको उद्देश्य के थियो?
पीएसए को उद्देश्य एक उपयोगी आउटरीच उपकरण को सिर्जना गरी मानिसहरूलाई DACA को बारे मा शिक्षित बनाउन र उनीहरु लाई अगाडि आउन र लागू गर्न प्रोत्साहित गर्नु थियो। हामी यसलाई DACA को एक बर्षे वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा यसलाई DACA घटनाको एक बर्षमा समावेश गर्ने आशा गरिरहेका थियौं, त्यसैले प्रतिक्रियामा यो PSA भिडियो चलचित्रमा आयो। प्रक्रियाको क्रममा त्यहाँ केही हिचकीहरू थिए र भिडियो ढिला भयो तर एक राम्रो साथीको सहयोगमा, र बालुवाको मेरो सानो अनाज भिडियो अन्त्यमा पूरा भयो र यो अहिले छ यूट्यूब। भिडियो पनि हाम्रो मा पोस्ट गरिएको छ dreamSF वेबसाइट.
भिडियोमा तपाईंको व्यक्तिगत कथा साझेदारी गरेको तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
मेरो कथा साझेदारी गर्नु भनेको यस्तो चीज हो जुन मलाई गर्न म साँच्चिकै रमाउँछ किनभने यसले अरूलाई उनीहरूका कथाहरू बाँड्न शक्ति प्रदान गर्दछ, तर साथै यसले मेरो कथा साझेदारी गर्न बल र साहस पनि दिन्छ। यो एक डोमिनो प्रभाव हो उनीहरूलाई अरूहरूसँग उनीहरूको कथा साझा गर्नका लागि थोरै साहस चाहिन्छ, र यी व्यक्तिको सकारात्मक प्रतिक्रियाले व्यक्तिलाई उनीहरूको कथा बताइरहेको साझेदारी गर्ने कार्यमा साहस दिन्छ।
केहि कारणहरू छन् जुन DACA योग्य युवाहरूले अझै आवेदन गरेका छैनन्?
मलाई पक्का थाहा छैन र म ती व्यक्तिहरूको तर्फबाट कुरा गर्न सक्दिन जसले अझसम्म DACA का लागि आवेदन दिएका छैनन्, तर यदि मैले अनुमान लगाए किन उनीहरूले आवेदन गरेनन् भने म यो भन्न सक्दछु कि उनीहरूले यो बुझेको छैन। यो गर्न पैसा छ। DACA का लागि आवेदन दिन लागत १TP२TT6565 is हो जुन धेरै ठूलो लगानी हो र धेरै व्यक्तिहरू आवेदन प्रक्रियासँग अपरिचित छन् र यसलाई नवीकरण गर्न के लिन्छ, त्यसैले हामीले सही शैक्षिक र वित्तीय स्रोतहरू प्रदान गर्नु पर्छ।
तपाइँले MAF को बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो?
Mission Asset Fund (MAF) ले पक्कै मेरो जीवनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। पहिलो पटक मैले उनीहरूको बारेमा सुनेको कानूनी सेवा बालबालिकाहरूको लागि हो, संस्था जसले मलाई मेरो DACA आवेदन प्रक्रियाको साथ मद्दत गर्‍यो। उनीहरूले सुझाव दिए कि म वित्तीय सहयोगको लागि MAF मा जान्छु किनकि DACA आवेदनको लागि तिर्ने उधार सेवाहरूको शीर्षमा DACA आवेदकहरूको लागि उनीहरूले $155 छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेका थिए। म तिनीहरूको कलमा सामेल भएँ Dreamers को लागी Lending Circles मेरो आवेदन को लागी भुक्तान हुने चेक प्राप्त गर्न के म आवेदन भर्ने क्रममा एक चरण पछि थिए? अब, कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई सामूहिक loanण लिने र बचत गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं आफ्नो आवेदन तिर्न सक्नुहुनेछ।
शहरले आप्रवासीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने अन्य केहि तरिकाहरू छन्?
विशेष रूपमा, हाम्रो कार्यालय आप्रवासीहरूलाई भाषा पहुँच, प्राकृतिक सेवाहरू र DACA युवा / वयस्क आप्रवासीहरूको सर्तमा मद्दत गर्दैछ, हामी सुरू गर्दैछौं सपनाहरू फेलो कार्यक्रम त्यो विशेष रूपमा DACA स्वीकृत व्यक्तिहरूको लागि हो र हामीसँग छ नागरिकता पहल गर्न पथ.
तपाईको इमिग्रेशन सुधारको आशा के छ?
व्यापक आप्रवासी सुधार सबै आप्रवासीहरूका लागि अपवाद हुनेछ जुन हाल अमेरिकामा बसिरहेका छन् मलाई यकिन छ कि यस व्यापक सुधार कुनामा छ तर हामी सबैले प्रक्रियामा प्रयास गर्नुपर्नेछ र यसमा चासो देखाउनुपर्दछ। हामीसँग हाल DACA छ तर हाम्रा आमाबुवा र उनीहरू जसले DACA को लागि आवश्यकताहरू पूरा गर्दैनन् उनीहरूलाई के हुन्छ? हरेक Undocumented व्यक्ति DACA को लागि योग्य छैन धेरै परिवार बिच्छेद भइरहेको छ जबकि अध्यागमन सुधार ठप्प छ। हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ वा हाम्रो समुदायले पीडित छ।
नागरिक सगाईको तपाइँलाई के मतलब छ र यो तपाइँको जीवनमा कसरी महत्त्वपूर्ण छ?
मेरो लागि, यो मेरो कथाको दोस्रो अध्याय हो। म OCEIA सँग अब २ बर्ष भइसक्यो र यो घरबाट टाढा घर हो। म उनको टोलीको हिस्सा बन्न मौका दिदै निर्देशक पनलाई पर्याप्त धन्यवाद दिन सक्दिन। मेरो इन्टर्नशिपको सुरुदेखि नै काम कठिन भएको छ, र मेरो मतलब यो कि सबै भन्दा धन्यवादी तरीकामा। धन्यबाद किनभने मैले गरेको सबै कामबाट मलाई थाहा छ मलाई राम्रोसँग तयार रहेको अरु जुनसुकै कामको लागि पनि आउँछ। म रिचर्ड हिप्प्पललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ऊ त्यहाँ हरेक पाइलामा पुगेको छ। उसले मलाई कार्य चुनौतीहरू मार्फत मात्र होइन जीवनका चुनौतीहरू पनि मार्गनिर्देशन गर्दछ। जे होस् मैले OCEIA को साथ धेरै कुरा गरेको छु, यो मात्र सुरुवात हो। म अझै पनि उनीहरूसँग धेरै बर्षको लागि हेर्दैछु, र OCEIA बढ्दै जाँदा, म पनि गर्नेछु।
नेसिमा अबेरा Mission Asset Fund मा मार्केटिंग सहयोगी र नयाँ क्षेत्र फेलो हो। उनी कथा कथन, सामाजिक राम्रो र चियाको राम्रो कप मनपराउँछिन्। तपाईं उसलाई पुग्न सक्नुहुन्छ [email protected].